Toy izany koa ny amin’ireo biby mpiaro tanàna sy ny fitaovam-piadiana tsotra. Kendrena ny hampiditra ireo fitakian-ketra ireo ao anatin’ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibola 2017. Tsy ny famoronana hetra vaovao no vahaolana fa ny famerenana ny fitokisan’ny vahoaka ny fitondrana, hoy i René Rasolofo, mpikamban’ny Filankevitra ambonin’ny tetezamita na CST teo aloha. Ny tsy fahatokisan’ny vahoaka ny fanjakana no mamparisarisa ny vahoaka handoa hetra. Tsy misy ny fangaraharahana ary iaraha-mahita fa tsy misy fiantraikany amin’ny sosialim-bahoaka mihitsy ny fandoavan-ketra eto amintsika. Firenena anisan’ny tsy mpandoha hetra indrindra i Madagasikara kanefa ilain’ny firenena ny fandoavana izany. Mila apetraka kosa anefa ny lamina sy ny fifampatokisana eo amin’ny entina sy ny mpitondra ka ho ara-drariny sy araka ny tokony ho izy ny fitantanana ireny vola alaina amin’ny olom-pirenena ireny. Mila fantany sy tsapany ny fiantraikany mba hiteraka faharesen-dahatra ho azy fa tsy atao an-terisetra. Raha izay no tafapetraka dia hilamina ny resaka fandoavan-ketra ary hitombo ny taham-pandoavana izany.